Bosaso: In ka badan 2000 oo Dumar ah oo sheegay in ay soo wajaheen shaqo la’aan-Dhegayso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Bosaso: In ka badan 2000 oo Dumar ah oo sheegay in ay soo wajaheen shaqo la’aan-Dhegayso
Bosaso: In ka badan 2000 oo Dumar ah oo sheegay in ay soo wajaheen shaqo la’aan-Dhegayso
March 10, 2018 - By: Abdirahman Abdi
Dumarka Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa in ay yihiin laf dhabarta Bulshada, sidoo kale Dumarka ayaa lagu sheegay in ay yihiin dadka ugu badan ee ay taabatay dhibaatadii ka dhacday dalka kadib bur-burkii Dowladdii dhexe.
Dumar fara badan ayaa dhexda u guntaday bar-baarinta carruurtooda, si ay hormar u gaarsiiyaan carruurtooda. Dumarka ayaa u shaqa taga ama qabta shaqooyin kale duwan si ay u soo helaan nolol maalmeedka carruurta.
Shaqooyinka ay qabtaan Dumarkaasi ayaa waxaa ka mid ah qashin qaadista, dhar dhaqista iyo naafadda guryaha, iyagoo ka helaya qarash dhan 80 ilaa 100 kun shili Soomaali.
Dumarka ayaa ka soo barakacay colaad iyo abaar.
Hadabada Dumarka ku nool Magaalada Bosaso gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah iyo kuwa danyarta ah oo la hadlay Horseed Media ayaa sheegay in shaqo la’aan ay la soo deristay, kadib markii shaqooyinkii ay qaban jireen ay la wareegeen shirkado waaweyn.
Dumarka ayaa intaa ku daray in shaqooyinkaasi ay ku dabari jireen nolosho carruurtooda, sida waxbarashada, caafimaadka iyo kirada guriga.
..Aniga waxaa korsadaa carruur agoon ah, qaarna waxa ay korsadaan carruur ay aabahood kala tageen, shaqadan waxaan ka shaqeynayey muddo dhan 15 sano, runtii xaaladayna waa ay xun tahay shaqadii aynu qaban jirnay meesha ayey ka baxdey, waxaan qabano mana naqaan ayey tiri Luul Cabdullaahi.
Hoos ka dhegayso Codadka Dumarkaasi oo Dhammeystiran.